Xukun lagu riday rag dhac ka geystay magaalada Muqdisho | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Xukun lagu riday rag dhac ka geystay magaalada Muqdisho
Xukun lagu riday rag dhac ka geystay magaalada Muqdisho
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dalka Soomaaliya ayaa maanta ay xukuno kala duwan ku riday rag lagu helay inay si farsameysan dadka ku nool magaalada Muqdisho u dhici jireen.
Raggan oo laba ah ayaa lagu kala Magacaabaa Cabdifitaax Cali Cumar iyo Nuur Cali Xasan, waxaana sigaar ah Cabdifitaax Cali Cumar loogu helay in isaga oo wata gaari nooca raaxada ah uu si farsameysan dadka uga dhici jiray teleefoonada gacanta halka Nuur Cali Xasan loo heysto in uu mobeelada u iibgeyn jiray.
Cabdifitaax Cali Cumar oo qirtay dambiga lagu soo eedeeyay ayaa maxkamadda ka hor sheegay in sida farsameysan uu dadka u dhici jiray uu kasoo kin-guuriyay aflaanta hindida ah oo uu daawaday, isaga oo sidoo kale soo bandhigay tirada dadka uu dhaca u geystay.
Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay in raggaan uu ku cadaaday dambiyada lagu soo eedeeyay, waxaana Cabdifitaax Cali Cumar lagu xukumay 10 sano oo xabsi Ciidan ah, halka Nuur Cali Xasan lagu xukumay 2 sano oo xabsi xiidan ah.
Xukunsanayaasha ayaa heysta muddo ku siman 30 cisho oo ay racfaan qaadan karaan, sida lagu sheegay warka kasoo baxay maxkamadda Ciidamada.
Xukunkan lagu riday maanta raggan lagu helay vurcadnimo ayaa uu kusoo aadayo xilli toddobaadyadii la soo dhaafay dadka ku nool degmooyinka gobolka Banaadir ay ka cabanayeen kooxo burcad ah oo teleefoonada ka dhacaya.